Goobihii Diiwaan-gelinta Medeniga ah ee Burco oo u Xidhmay Dhaqaale La’aan | Duul News International
Goobihii Diiwaan-gelinta Medeniga ah ee Burco oo u Xidhmay Dhaqaale La’aan	(Duulnews/Yool)-Goobaha ay ka socotay Diwaan-gelinta Medeniga iyo codbiyeyaasha ee Magaalada Burco, ayaa shalay qaar kamida albaabada loo laabay, Shaqaalihii ka shaqaynayeyna suuqa kala galeen,kaddib markii sida la sheegay ay ka go’een qayb kamida qalabkii aasaasiga ahaa ee ay howsha ku wadeen, sida Waraaqihii iyo agabkii kale ee daruuriga ahaa.
Ma jiro wax war ah oo Maamulka Gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ka soo saaray xidhista Goobaha diwaan-gelintu ka socotay, hase ahaatee waxa talaabadan si weyn uga biyo diiday Shacbiga aan wali Is-diwaan-gelin ee Magaaladaas ku dhaqan. Shacbiga ayaa ku eedeeyey talaabadan Maamulka gobolka.
“Waxaan doonayay inaan iska diwaan-geliyo goobtan Guriga cuqaasha Gobolka, waanay xidhantahay. Maamulka Gobolka ayaannan ku eeddeynaynaa inuu xidhay goobaha Diwaan-gelinta”sidaasi waxa Warbaahinta u xaqiijiyey Axmed Muuse Xasan oo kamida Bulshada ku dhaqan Magaalada Burco ee ka biyo-diiday hakadka ku yimi howsha Diwaan-gelinta ee Gobolka Togdheer. Sidoo kale, Dad badan oo Warbaahinta ugu waramay goobaha la xidhay ayaa iyaguna dhaleeceeyey qaflada la saaray, taasoo ay Xukuumadda ku dhaliileen.
Geesta kalena, Wararka ka imanaya Magaalada Berbera ayaa sheegaya inay Shaqaalaha Diinwaangelinta ka wada Gobolka Saaxil, ayaa ka cabanaya Musharaadkii loogu talo-galay oo ka maqan muddo laba Bilooda.
Shaqaalaha, ayaa Mushahar la’aanta ku eeddeeyey Badhasaabka Gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar, oo ay sheegeen inuu ka lunsaday 2 Bilood Mushaharkood ama uu ka sag-saagay, ‘Maadaama uu ku tiraabayo marka ay u yimadaan Beri kaalay, Beri aan Dhammaanay-ba,sida cabashada u dhigeen.
Geesta kalena qaar ka mid ah shaqaallaha hawshan waday oo aanu la xidhiidhnay, ayaa noo xaqiijiyey inaanay Muddo 2 Bilood ahba wax mushaahar ah qaadan, iyagoo intaa ku daray inay kharash la’aan taagan yihiin oo ay qaarkood magaalooyinka qariib ku yihiin, waxanay sheegeen in cuntooyinkii iyo Hoteladii lacagtoodii lagu leeyahay, isla markaana aanay haynin waxay iskaga bixiyaan, marka ay la haddlaan masuuliyiinta Gobolka ee Fahmi ugu sareeyona aanay Jawaab ay ku qancaan ka helin.
Wararka ka imanaya Magaallooyinka Gobolka qaar ayaa sheegaya in goobaha qaarkood la xidhay, kaddib markii ay shaqaalluhu sii wadi kari waayeen howsha kharash la’aan darteed.
waxa kale oo iyana aanu khadka Telefoonka kula xidhiidhnay qaar ka mid ah madax Dhaqameedyada Gobolka Saaxil ee hawshan Diiwaangelinta ka qayb-qaadanaya, kuwaasoo iyaguna dhankooda caddeeyey inaan la siin Mushahar muddada labada bilood ah.
Lunsiga Lacagtii Wacgelinta Bulshada iyo Gaadiidka:
Sidoo kale Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Bebera ayaa sheegaya in gebi ahaanba lagu takri-falay lacagtii Wasaaradda Daakhiligu u qoondeysay Wacyigelinta bulshada iyo weliba Kharashkii Gaadiidka Shaqaalaha iyo agabka u kala qaadayey Deegaanada Gobolka Saaxil, arrinkaas oo isagana eeddiisa dusha laga saaray masuuliyiin uu ka mid yahay Guddoomiyaha Gobolka Saaxil.
Fariinta Shaqaalaha ee Wasaarada Arimaha Gudaha
Shaqaalahan Diiwaangelinta Madaniga ee Gobolka Saaxil ayaa waxay fariin cabasho ah u direen Waasarada Arimaha Guddaha Somliland, taasoo nuxurka ay xanbaarsanayd ahaa; “in la soo kala gaadho iyaga iyo Badhasaabka Fahmi Cabdi Bidaar oo ay Wasaarada Arimaha Gudaha cadeyso in mushahar laba bilood lacagtoodii ay Wasaaradu hayso iyo inay u soo dhiibtay Fahmi .
Ma jirto wax jawaab ah oo ay Wasaaarada Arrimaha Guduhu ka bixisay caqadabaha kala duwan ee hakadka geliyey howsha Diwaan-gelinta oo gobollada qaar muddo kooban ka socday.
Daawo: Wafdigii Uu Hogaaminayay Wasiirka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan Oo Gaadhay Dalka Ingiriiska Iyo Jaaliyada Reer Somaliland Oo Si Weyn Usoo Dhawaysay